Redmi K20 စီးရီးရောင်းအားသည်တစ်သန်းအထိကူးသွားသည် Androidsis
Redmi K20 စီးရီးများအရောင်းသည်၎င်း၏ပထမလတွင်ယူနစ် ၁ သန်းကျော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်
သင်စျေးကွက်ကိုခြေလျင်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဘယ် Xiaomi ဖုန်းကိုကောင်းစွာရောင်းချနိုင်မည်နည်း။ ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေက "ဘယ်သူမှ" ဖြစ်နိုင်တယ်။ တရုတ်ထုတ်လုပ်သူက၎င်း၏ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုအရောင်းအ ၀ ယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်ပုံသေနည်းရှိသည်ပုံရသည်။ အဆိုပါ Redmi A စီးရီးသူများကအတည်ပြုခဲ့ကြသည်.
တစ် ဦး ဖြစ်ရပြီအခြားသူများ စန်း စတိုးဆိုင်များတွင် Redmi K20 စီးရီးများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်မကြာသေးမီကစတင်ပြီးကတည်းကသုံးစွဲသူအမြောက်အမြားကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားလာပြီး၎င်းကိုအတည်ပြုရန်သူတို့၏ရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Redmi K20 စီးရီးကိုမေလ ၂၈ ရက်တရုတ်ပြည်တွင်တရားဝင်စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတစ်သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဒီအချက်ကို Global Spokesperson နှင့် Xiaomi ၏ဒါရိုက်တာ Donovan Sung ကသူ tweet တစ်ခုမှထုတ်ဝေတဲ့ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့သည်။
ဂရိတ်သတင်းများ၊ ၏တင်ပို့မှုကြေညာရန်စိတ်လှုပ်ရှား # RedmiK20 စီးရီးပထမလအတွက် 1M ယူနစ်ထိမှန်! ?
သင်၏ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mi ပရိသတ်များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ❤️#redmi လူတိုင်းအတွက် #InnovationFor pic.twitter.com/lCpkOSrJdC
- ဒိုနိုဗန်ဆန် (@donovansung) ဇူလိုင်လ 1, 2019
ဒီသီချင်းကိုတရုတ်နိုင်ငံနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့တွင် - စမတ်ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ Redmi K20 y K20 Pro ကိုသူတို့ကဒီတူညီတဲ့အမည်များကိုစောင့်ရှောက်။ သို့သော်ဥရောပစျေးကွက်ကဲ့သို့သောအခြားစျေးကွက်များအတွက် Xiaomi Mi 9T နှင့် Mi 9T Pro တို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
Redmi K20 တွင် ၆.၃၉ လက်မ FullHD + မျက်နှာပြင်ပါရှိသည်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခု Snapdragon 730 octa-core Adreno 618 GPU၊ ၆ GB RAM၊ သိုလှောင်မှုပမာဏ6သို့မဟုတ် 64 GB၊ ၄၀၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီ၊ ၄၈ MP + 128 MP + 4,000 MP သုံးဆကင်မရာနှင့် 48 megapixel selfie ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာ။
Redmi K20 Pro သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ချက်ချင်းရောက်သည်
Redmi K20 Pro တွင်၎င်း၏ညီငယ်တပ်ဆင်ထားသည့်တူညီသောမျက်နှာပြင်၊ ဘက်ထရီနှင့်ဓာတ်ပုံဆိုင်ရာကဏ္withများတပ်ဆင်ထားသော်လည်း ပို၍ စွမ်းအားပြည့်သည့်ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည်။ Snapdragon 855 ထို့အပြင်၎င်းတွင် 640/6 GB RAM နှင့် 8/64/128 GB သိုလှောင်မှုပမာဏရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Redmi K20 စီးရီးများအရောင်းသည်၎င်း၏ပထမလတွင်ယူနစ် ၁ သန်းကျော်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်
ကောင်းပြီ၊ ကားထဲမှာရော Android Auto နဲ့အလုပ်လုပ်လို့မရတဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးအစ်ကို MI 9T နှစ်ခုလုံးမှာ TERRIBLE FAILURE ကို ANDROID AUTO နဲ့ပြင်ဖို့လိုသည်။
Samsung က Galaxy Fold ကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်